Warshadda Shiinaha ee Faashadda Paris (POP) Soo saarkeeda iyo Warshaddeeda | Weirui
Waxyaabahayagu waa la hayaa labadaba faa'iidada nooca, budada ma soo bixi doonto, waqtigana adkeynta ayaa dhakhso leh. Qiimaha kalooriga ayaa la jaan qaadi kara heerkulka aadanaha, sidaa darteed ma gubayo bukaanada isticmaalaya. Waxay qaadataa saynis sare oo buuxi warqad dhakhtar , hirgeli sida ku cad britain-ka BP ...
Waxyaabahayagu waa la hayaa labadaba faa'iidada nooca, budada ma soo bixi doonto, waqtigana adkeynta ayaa dhakhso leh. Qiimaha kalooriga ayaa la jaan qaadi kara heerkulka aadanaha, sidaa darteed ma gubayo bukaanada isticmaalaya. Waxay qaadataa saynis sare oo buuxi warqad dhakhtar , u dhaqan geli si waafaqsan heerka BP ee Britain.
1) Waqtiga adkeynta si deg deg ah oo xasilloon: 2-5 daqiiqo.
2) Waqtiga biyaha qoyan waa dhakhso: 5-10 sec.
3) Waa la qalajin karaa inay ahaato mid aad u dhakhso badan kadib adkeynta, xoojinta waxay gaari kartaa 3.2mpa 8 daqiiqo kadib.
4) Qiimaheeda kaloorigu waxay ku dhowdahay heerkulka aadanaha: 38-42.
5) Adkeynta waa sida ku xusan codsiga dhakhtarka iyo bukaanka, guud ahaaneed wuxuu ku duudduuban yahay 6-8 lakab, wuxuu ku duudduubay 8-12 lakab oo ah booska xoogga, way fududahay in la maareeyo caafimaadka iyo amniga, wax badanna waa laga gudbay tijaabinta tijaabada caafimaadka, ku guuleysto fadhiga dhakhtarka iyo bukaanka si qoto dheer.
Summada alaabta Cabir
Faashadaha Faashadda Paris waxaa loo isticmaalaa Dayactirka nuuradda.
Hore: Faashad Tubular
Xiga: U ekaanshaha Faashadda PBT